दशैंको सन्दर्भ पारेर कीर्तिमानी गीतकार डा. उपाध्यायको दशैं भजन सार्वजनिक (भिडियो)
43323114 1158805 10267637 31896672
काठमाडौं ।विश्व कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको दशैं भजन ‘नव दुर्गा’ सार्वजनिक भएको छ । आजदेखि नेपालीको महान् चार्ड वडा दशैं सुरू भएको सन्दर्भ पारेर दुर्गा भजन सार्वजनिक गरिएको हो ।यसमा सागर अधिकारी ‘शरद’को स्वर तथा सङ्गीत र देवेन्द्र नेवाःको एरेञ्ज रहेको छ । गीत सर संगीतमा रेकर्ड गरिएको हो । यस गीतलाई पवन भाटले रेकर्डिङ गरेका हुन् भने सन्तोष पौडेलको मिक्सिङ , माष्टरिङ रहेको छ ।गीतमार्फत नै डा. उपाध्यायले ३२ विश्व रेकर्ड राखिसकेका छन् । उपाध्यायका गीत सबै वर्ग, पेशा र समुदायका लागि मन छुने खालका छन् । उनी साहित्यकार पनि हुन् । भिडियो :
१ कार्तिक २०७७, शनिबार ०९:४५
विश्व कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको दशैं भजन ‘नव दुर्गा’ सार्वजनिक भएको छ । आजदेखि नेपालीको महान् चार्ड वडा दशैं सुरू भएको सन्दर्भ पारेर दुर्गा भजन सार्वजनिक गरिएको हो ।
यसमा सागर अधिकारी ‘शरद’को स्वर तथा सङ्गीत र देवेन्द्र नेवाःको एरेञ्ज रहेको छ । गीत सर संगीतमा रेकर्ड गरिएको हो । यस गीतलाई पवन भाटले रेकर्डिङ गरेका हुन् भने सन्तोष पौडेलको मिक्सिङ , माष्टरिङ रहेको छ ।
गीतमार्फत नै डा. उपाध्यायले ३२ विश्व रेकर्ड राखिसकेका छन् । उपाध्यायका गीत सबै वर्ग, पेशा र समुदायका लागि मन छुने खालका छन् । उनी साहित्यकार पनि हुन् । भिडियो :
गीतकार डा. उपाध्याय, दशैं भजन
Prevनवरात्रमा शक्तिपीठहरुमा नित्य पूजा मात्रै हुने, मन्दिर खोल्न विश्व हिन्दू महासङ्घको माग
कोरोना सङ्क्रमणका कारण वडा सदस्यको मृत्युNext